Ny zavatra rehetra tokony hahafantaranao momba ny voly spiro - APICMO
Fahalalàn-jaza > Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny vovoka spiro
Teny fanolorana ny Spiro
Ny fitambaran'ny spiro dia singa ara-biôlôjiana izay ahitana rôbika roa mitambatra amin'ny atoma tokana. Ny natiora dia mety ho mitovy na hafa ny rafitra misy ny peratra, ary ny atôma izay mampifandray ireo peratra roa dia antsoina hoe spiroatom (atomika), matetika dia karazana 4 (fantatra ihany koa amin'ny karba-drala), ary dia silisy, phosphor, na arsenika koa. Ny atomôba spiro dia amin'ny ankapobeny ny atoma amin'ny karbaona quaternary. Ny ampiasain'ny spiro dia hampiasa ny fononteny hanoratra ny isan'ireo singa manokana. Ny tarehintsoratra dia misy ny spiro atom ihany koa, ary ny isa kely dia eo anoloan'ny tarehimarika ary misaraka amin'ny teboka iray.
Farafahakeliny ny peratra roa ao amin'ny molecule dia mizara atôma karbonika (amin'ny hafa, atôma hafa, toy ny silisy, phosphorus, arsenika, sns.). Ny peratra roa dia eo amin'ny fiaramanidina anankiroa mifamatotra amin'ny samy hafa: ny toeran'ny solon-tsavoka azo ampiasaina dia chiral ary azo alamina ao amin'ny isomera optika (jereo ny isomerism optika). Amin'ny endrika endrika, propadiene H2C = C = CH2 no singa tsotra indrindra amin'ny spiro, ary ny propadiene izay manana tosika mifanaraka tsara, toy ny asidra 1,3-propadienediic dia mavitrika ary azo zaraina amin'ny isomera roa mibaribary. vatana.
(1) Araka ny isan'ny atôma spiro, ny vatana spiro dia azo sokajiana ho singa spiro tokana, dispiro, triple spiro, ary fifangaroam-pirafitrana misy tsipika misy spiro.
(2) Ny firafitry spiro carbocyclic sy ny spiro ny heterocyclic dia azo sokajina arakaraky ny karazam-pandrefesana hita ao, ary rehefa atosiky ny atoma hafa ny atôba karbôklika dia manoloana vovoka spiro heterocyclic.
(3) Araka ny karazana peratra, dia azo zaraina amin'ny fitambaram-panafody, tsy manasitrana, aromatika sy aliphatic.
(4) Fandrindrana heterospirocyclic Coordination. Ny atidoha spiro ao amin'ny spiro dia mety ho atôma karbôna na singa hafa toy ny Si, N, P, Ge ary ny toy izany. Raha atomôma metatra ny atiny spiro, dia mitambatra ny fatoram-pandaminana, ary ny fikambanana spiro toy izany dia antsoina hoe fikambanana heterocyclic.
Polymerico spiro compound
Ny fitambaran'ny spiro polymer dia mifangaro ny atôma roa na maromaro amin'ny spiro telo na mihoatra. Rehefa namorona spiro ny rakitra iray, ny famaritana numerika izay manampy di-, tri-, tetra-, ..., sns. Amin'ny anarana dia midika hoe isa ny atôma spiro izay misy eo anelanelan'ny peratra. Ny atôma ao amin'ny fitambarana spiro dia nadika ara-dalàna. Ny endriky ny endri-pifandraisana polyspirocyclic dia manomboka amin'ny molekiolan'ny perla izay mampifandray ny atin'ny spiro, izay antsoina hoe ring metatra. Ireo molecule polyspirocyclic dia afaka manana rindrina roa na maromaro ary mifandray amin'ny fitambaran-tsiranoka maromaro. Anisan'izany ny atomika iray amin'ny elany iray mifamihina. Ny nomerika ao amin'ny peratra terminal dia ateraky ny atoma akaikin'ny atin'ny spiro, izay voalaza fa ny isa 1, ary ny molekule dia isaina manomboka amin'ny molekiola.
Ny roa na mihoatra ny peratra farany, ny antombon'ilay peratra farany dia hanana fomba fifantenana hafa. Rehefa voalahatra ny spiroatom voalohany dia ny fifindrana spiro manaraka dia tokony hifandray amin'ny spindle kely indrindra. Hita isa. Eritrereto hoe misy fitambarana misy peratra roa, iray amin'ny atoma 6 ary ny iray hafa amin'ny atoma 8. Ny laharana dia manomboka amin'ny peratra 6 atôma, satria aorian'ny nomerainganana, dia ny spiroatom dia hiantso ny 6. Raha manomboka ny sata 8, ny spiroatom dia hiantso ny 8. Ny fitarihana ny isa dia voafaritra amin'ny spiroatom (manomboka amin'ny spiroatom voalohany amin'ny peratra farany efa voamarina). Eritrereto hoe manomboka amin'ny laharana iray ny atomaokely, ary raha latsaky ny isa ny isa amin'ny làlana hafa, dia atokana ny atoma snail. Ny fitarihana amin'ny isa kely dia ampiasaina hanombohana ny anarana. Ao amin'ny atomaingan'ny siramamy manaraka, tsy dia zava-dehibe loatra ny habeny. Amin'ny toe-javatra sasany, ny roa na telo, efatra, na efatra, dia hampidirina amin'ny isa mitovy avokoa na aiza na aiza misy azy ireo. Ny fisafidianana ny fitarihana ny laharana dia voafaritra amin'ny fizotry ny laharana rehefa misy atoma samihafa amin'ny atomika mifangaro ary mifanaraka ny fitarihana ny atôma ambany ambany. Ohatra, raha ny rafitra nomerao amin'ny lalana iray, ny isan'ny spiroatom tsirairay dia 3, 5, 7, 10, ary ny isan'ny spiroatoms amin'ny làlana hafa dia 3, 5, 7, 9, avy eo ny teboka faharoa is selected. . Amin'io tranga io, eo amin'ny laharana voalohany dia ny 7 sy 10 sy ny 7 sy 9 mifanandrify amin'ny laharana mifanohitra. Ny laharam-pamokarana isam-bolana no tsy manan-danja, ary ny tari-dalana laharana dia voafaritra amin'ny fitarihana ny isa 9.
Ao amin'ny fametrahana ireo singa spiro maro, ny isa voalohany amin'ny fonon-teny dia manondro fa ny atoma ao amin'ny peratra voalohany akaiky indrindra amin'ny atin'ny spiro no isa voalohany. Ny isa sisa tavela dia mampiseho ny isan'ny atôma eo amin'ny atôma spiro, na ny atôma ao amin'ny peratra. Ny isa tsirairay dia misaraka amin'ny vanim-potoana (vanim-potoana anglisy). Amin'ity ohatra ity, misy atôma roa (nomerao 1 sy 2) alohan'ny spiroatom voalohany (3). Tsy misy atôma eo anelanelan'ny 3 sy 4 spiroatoms, ary mitovy ihany koa ny spiroatoms amin'ny 4 sy 5, 5 ary 6. Misy atôma roa eo amin'ny peratra faharoa, 6 sy 5, 5 ary 4, ary misy iray eo anelanelan'ny 4 sy 3.
Noho izany, ny fizarana [2.0.0.0.2.1.1.1] dia azo. Ao amin'ny ohatra eo ankavanana, misy spiroatoms roa, ka manomboka ny dispiro anarana. Ao amin'ny peratra voalohany, misy atôma roa, manondro ny anaran'ny dispiro [2. Avy eo dia misy atôma iray sy efatra ao amin'ny paositry ny terminal hafa eo amin'ireo spiroatoms roa, manazava ny anarana roa snails [2.1.3 5. Ny spiroatom faharoa, nomerao 5, dia nampidirina ho toy ny lalana izay hitovy amin'ny isan'ny ataoma taorian'ny isan'ny atôma tao amin'ny peratra farany, ny fotoana farany mampiakatra ny 9 sy 10 atôma eo anelanelan'ny 3 sy 5 spiroatoms Ary atsaharo ny alanina manana ny Ny isa atomin'ny spiro compound, decane, namedispiro [2.1.3 5 .2 3] asehon'ilay anarana.
Anarana iombonana amin'ny teny gaelika sikaotisy
Ny votoatin'ny monospirocyclic dia mamaritra ny anaran'ny hydrocarbon amin'ny ray aman-dreny araka ny isan'ny atôma rehetra voatanisa amin'ny famolavolana perla; ny atôma rehetra ao amin'ny perla spiro dia voaisa araka ny filahatry ny peratra kely ary ny peratra lehibe sy ny atôma spiro dia kely kokoa; Avy eo dia arahin'ny paroasy efamira izy ireo. Ny endriky ny isa amin'ny peratra manontolo dia aseho amin'ny isa misy ny atomôma karbonika misy eo amin'ireo atidoha spiro tsirairay, ary eo anoloan'ny anaran'ny karbôkôkôlan'ny kofehy mifanandrify amin'ny peratra manontolo; Ny isa dia misaraka amin'ny teboka ambany, amin'ny endriny: snail [a, b] ancane.
Ny vokatra anôomerika amin'ny peratra heterospiral dia midika fa atôma roa-electro-positifs na paone elektrônônô ny paikady ao amin'ny fikorontanana no mifanohitra amin'ny fotoana hampihenana ny fotoana dipole amin'ny molekiola ary hampihenana ny angovo entramolekular. Tao amin'ny 1968, ny ekipa fikarohana momba ny fanadihadiana dia nanolotra voka-pifidianana iray. Rehefa nianatra ny acétale bicyclic izy ireo, dia hitany fa ny singa roa ao amin'ilay sary etsy ambany dia nahitana ny 57% ny cis isomer ary 43% ny isomoron'ny transitres amin'ny fitomboana mitovy amin'ny 80 C. fahasamihafana angovo avy amin'ny 0.71 kJ / mol. Noho ny vokatra anôôôma amin'ny cis isomer dia tsy misy vokany toy izany ny isomera trans.
Misy siramamy siramamy misy siramamy. Mety ho toeram-pitsaboana ny spiroatoms, eny fa na dia tsy misy ireo mpanodina efatra samihafa mila jerena ny fiantohana. Rehefa mitovy ireo singa roa ireo, dia manome laharam-pahamehana ambony kokoa ny rafitra CIP mba hanitarana ny fanitarana ny peratra iray ary ny iray hafa amin'ny laharam-pahamehana ambany kokoa. Azo ampiharina raha tsy mitovy ny peratra.
Ny famaritana sikilika dia azo sokajiana ireto fepetra manaraka ireto:
• Alicyclic composite
Ity dia fikambanana organika izay sady endrika mifangaro no mampifandray azy. Misy karazana iray na maromaro marevaka na tsy misy fanasitranana izy ireo, saingy tsy mahasalama ny peratra.
Araka ny haben'ny peratra, ny naphthenes dia azo sokajiana ho kely, midina ary lehibe. Ny cyclopropane sy cyclobutane dia heverina ho kely. Ny cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, ary cyclooctane mankany cyclotridecane dia efa be dia be, ary lehibe kokoa ny heverina ho toy ny nafenina lehibe.
Ity dia karbônika boribory mitahiry karibonona karbonika karbaona ao anatiny. Ny monoolefins tsotra sikika dia ahitana cyclopropen, cyclobutene, cyclopentene sy cyclohexene, raha ny cyclones dia manana cyclopropadiene, cyclobutadiene, cyclopentadiene. Andraso. Ny olefina siklaika sasany, toy ny cyclobuteneand cyclopentene, dia mety ho azo amam-bolana ho toy ny mpivavaka ho fananganana polymers.
• Aromainina aromatika
Ny karazam-boaloboka tsotra indrindra sy tena manan-danja dia benzene sy ireo homologues toy ny toluena, xylen, etylbenzene ary ny toy izany. Amin'ny aromatika dia misy arina aromatika tsy rafitra feno benzene, fa ny atôma karbonina ao amin'izy ireo dia nosoloina azota, oksizenina, solifara ary singa hafa. Antsoina hoe heterocycles izahay, toy ny dimy yuan toy ny furan. Ny atiny dia misy atoma oxygène ary ny pyrrole dia misy atômôty nitrogen.Thiophene dia misy atoma solfira sy ny toy izany.
Ary azo zaraina ny aromatika:
• Volokano arovary monocyclique
• Volkano ararikola polycyclique
Ireo karazana hydrocarbon aromatika manana endriky ny rojo dia matetika antsoina hoe alenan'ny aliphatic, ary ireo hydrocarbon arakary aliphaty araraka dia toluena, etylbenzene, styrene, ary ny toy izany.
Misy singa ararika tsy misy heterocyclique ringtype na substituent. Maro amin'izy ireo no fantatra na karazana kansera. Ny tsotra indrindra amin'ireto akora simika ireto dia napetaly, miaraka amin'ny peratra aromatika roa, ary koa ny tricyclic ruthenium sy phenanthrene.
Ny hydrocarbon aromatika polycyclika dia neutral, tsy molekiolan'ny molekiola hita ao amin'ny fitrandrahana arintany sy tar. Izy ireo ihany koa dia zavatra voarindra amin'ny fandevona tsy tanteraka (ohatra, ny motera sy ny fandoro fofona, rehefa mirehitra ny ala ao amin'ny afo mirehitra, sns.). Ohatra, izy io dia vokatry ny fandevona tsy misy ny fiompiana karbaona toy ny kitay, kitay hazo, fosaka ary paraky. Hita tao amin'ny nofy ihany koa.
Ny arika polycyclic aromatika mihoatra ny kofehy telo dia ambany tsy hentitra sy tsindry ambany vovoka amin'ny rano. Rehefa mihamitombo ny lanjany, dia mihena ny loto sy ny tsindry. Ny vovobony arika polycyclic dia manana ny fahamorany sy ny tsindry vaky. Ny herisetra arika polycyclique dia noho izany dia hita matetika any amin'ny tany sy amin'ny sedimenta noho ny amin'ny rano sy ny rivotra. Na izany aza, ny fiangonan'ny aretin-tsaina dia matetika hita amin'ny ratsan-kazo mihantona eny amin'ny rivotra.
Maro ny proteinina ararikariaka no voafaritra ho karsenôma. Ny tatitra momba ny fitsaboana dia manambara fa ny fatran'ny alikaola be dia be dia mety hiteraka korontana, kanseran'ny havokavoka, kanseran'ny vavony ary ny homamiadana. Ny vovobony arika polycyclique dia afaka mamotika ny fitaovana ara-panafody ao amin'ny vatana, miteraka ny fitomboan'ny sela homamiadana ary mampitombo ny mety ho voan'ny kansera.
Rehefa mitombo ny lanjany eo amin'ny molekiola dia mihamitombo ihany koa ny karzônôgenisite ny areti-poly aromatika, ary mihena ny toaka. Bozaka [a] pyrene (Benzo [a] pyrene), areti-mifangaro polycyclique, no karazana kininina voalohany hita.
Ny fampihenana ny volan'ny polymère mandritra ny fananganana sy fanamafisana ny famokarana dia vokatry ny herin'ny van der Waals eo anelanelan'ny molekiola monomiana ao amin'ny fanjakana mifehezana na ny molekiolan'ny lavaka mangirana, ary ny elanelana eo amin'ny molekiola dia lehibe; Rehefa vita ara-polymerisation na fifindrana, ny Covalent ny elanelam-potoana eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny singa fototra dia miteraka fihenan'ny volavolan-tsarimihetsika. Voalaza fa indraindray dia maty ho an'ny polymoretra ny fivalozana, toy ny fampitomboana ny fahanteran'ny polymoré, ny famoahana, ary ny fihenan'ny vokatra ankapobeny. Mba hamahana ny olana momba ny fihenan'ny famokarana polymère, ny mpahay simia dia nanao ezaka tsy miangatra, fa ny ankapobeny dia afaka mamerina fotsiny ary tsy afaka manala tanteraka ny fihenan'ny volan'ny olona. Hatramin'ny 1972, Bailey et al. dia namorona andian-tsambo sy spiro ary nahatsikaritra fa mirakitra ireo singa ireo. Rehefa mihen-danja ilay volavolan-dalàna dia mitatra izany. Nahitana ny mpikaroka maro mpahay siansa ny fisian'ireo monomiana nanitatra, ary nisy fikarohana maro natao. Nanjary lasa fitaovana polymoratives tena mavitrika ireo monometra efa nihanitatra. Ny firafetan-drafitra toy ny spiro orthoester sy ny spiro orthocarbonate dia ireo monomerina mielan-tsavoka ary ampiasaina amin'ny famolavolana composite avo be, haingon-tsakafo avo indrindra, fitaovana polymolegradable sy fitaovam-pitsaboana medikaly. Ny fanovana ny polymera ankapobeny sy ny fampiasana oligomera manana anton-draharaha.
Ny orinasa orinasa iray dia mamoaka ny hazavana sy ny halavam-pandehan'ny hazavana mamirapiratra ary ny fahombiazan'ny emission maivana dia miankina indrindra amin'ny rafitra simika. Matetika ny fluorescence dia mipoitra amin'ny planeta henjana sy rafitra mifangaro, izay mampitombo ny fiantraikan'ny elanelana elektronika sy ny coplanarità ny molekiola, izay mahasoa mba hanatsara ny fahaizan'ny fluorescence. Misy fitaovana maizimaizina organika maoderina. Ny karazana fototra dia: spiro, poly-p-phenylene vinylene, polythiophene, polythiadiazole ary metatra-koordination metaly. Anisan'izany ny firaisana ara-tsôbira ara-batana, manana rafitra lehibe mifandraika sy ny tsy fahampian-tsakafo sy ny coplanarity, ny mari-pahaizana haingam-pandrefesana avo lenta sy ny toetran'ny toetr'andro. Ny fitaovana EL dia tsotra ary tsy mitaky fitaovana sarotra, noho izany dia azo atao ny mampihena ny vidin'ny vokatra mandritra ny vanim-potoana sy ny fanomanana mora amin'ny fitaovana lehibe.
Ny singa ringana sy ny spiro miaraka amin'ny atomôma hetero dia tsy mora ny manohitra ny fanoherana noho ny hetsika miavaka ataon'izy ireo, ary nahasarika ny sain'ny besinimaro amin'ny fivoaran'ny pestisides. Ohatra: Rudi et al. dia nitatitra ny 3,9-dichloro-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro [5.5] aryecane-3,9-dioxide sy sulfide Hydrogen dia nanoloana ny fampidirana tantara noforonina Spiro, 3,9-dihydro-3,9-dithio-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphospho [5.5] undecane. Ny vokatr'izany dia karazana organiophosphate vaovao sy herbicides, izay afaka manala tanteraka ny grenady, ny tsiranoka, sns., Avy amin'ny vary, serealy, kotonga ary soja.
Previous Previous post: 2-Chloro-5-methylpyrimidine: CAS (sampan-tsifin'ny Chemical Abstracts Services) Registry Number 22536-61-4
Manaraka Next post: Ny heterocycles mihetsiketsika indrindra any an-tany